Baabuur Waxbarashada - GO! SPECTRUM SCHOOL
spectrum School > koorsooyinka our > auto
FULL-TIME // BSO // CAMPUS RUGGEVELD
Waxaad baraneysaa xirfadaha ganacsiga; samee baaritaano sax ah haddii ay dhacdo cillado, haysashada gawaarida iyo dayactirka sida waafaqsan shuruucda farshaxanka. Waxaad si madaxbanaan u shaqeysaa baabuurta, gaas, iwm.
QEYBTA TIMES // DBSO // CAMPUS RUGGEVELD
Adiga inta badan waxaad isku mashquulisaa dibadda gaariga. Waxaad baraneysaa sida loo hagaajin karo dhaawaca fudud ee shaqada wadooyinka. Waxaad baraneysaa sida loola shaqeeyo qalabka kala duwan, ka saar oo leexlehiyo oo lulmiyo qaybaha baabuurta, weldhada iyo alwaax, tuubo iyo ciid. Waxaad baraneysaa inaad sameysid midabada saxda ah oo si taxadar leh u buufisid shaqada jirka. Waxa kale oo aad baran doontaa qalabka, makiinadaha, ammaanka shaqada iyo korontada.
Qalabka Mechanics-ga Daryeelka
Waxaad baraneysaa inaad si madaxbanaan u shaqeyso baabuurta, gawaarida, gawaadhida, iwm. waxaad baraneysaa inaad sameyso baaritaanka saxda ah ee cilladaha, dayactirida gawaarida iyo dayactirka sida waafaqsan shuruucda farshaxanka.
7E SPECIALIZATION YEAR // FULL TIME // BSO // ARRIMAHA CAMPUS
Waxaad baraneysaa inaad ogaato khaladaadka lagu ogaado kumbuyuutarada la xakameynayo shaxda elektarooniga ah ee baabuurka. Waxaad sidoo kale baraneysaa farsamooyinka si aad u xalliso dhibaatooyinka ficilka.
Ku saabsan iskuulkayaga
Our dugsiga, School Spectrum ah, waxay bixisaa in ka badan 50 tababarka beroepsgerichte- iyo farsamo gudahood warshadaha, STEM, Sports, Caafimaadka, Martigelinta iyo Logistics.
Laga soo bilaabo aragtida "Learning +", waxaanu arday kastaa siinaa koorso wax lagu dhejiyo. Waxaanu u shaqeynaa hab ku salaysan farsamooyinka oo xoogga u saarnaa bixinta hagista suuqa shaqada.
Ka sokow manhajka aan u shaqayno iyada oo mashaariicda iyo hawlaha aad horumarinta shakhsiyadda ee ardayga iyo ogaadeen isaga ama iyada oo talanti. daryeelka aasaasiga ah Broad waa furaha.
Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin OKAN waax (Onthaaklas Waayo Newcomers).
Xiriirin dhakhso ah
Phone: + 32 (0) 3 328 05 00
Phone: + 32 (0) 3 217 43 40
Monday, 8u00 - 16u30
Talaado: 8U00 - 16U30
Arbaco: 8u00 - 12u00
Khamiis: 8U00 - 16U30
Jimco: 8U00 - 16U30
Sabti iyo Axad la xiray